Lumka Xa Usebenzisa Iiwebhsayithi Zokuncokola
ISIZATHU SOKUBA KUBALULEKILE: Njengezixhobo ezininzi, iiwebhsayithi zokuncokola zinokunceda okanye zibe yingozi. Amanye amaKristu akhetha ukungazisebenzisi. Kanti amanye wona ayazisebenzisa ukuze ancokole nentsapho nabahlobo. Kodwa ke, uMtyholi ufuna sizisebenzise ngokungakhathali ezi webhsayithi ukuze singcolise amagama ethu kwaye sonakalise nobuhlobo bethu noYehova. NjengoYesu, simele sisebenzise imigaqo ekwiLizwi LikaThixo ukuze sibone iingozi size sizibaleke.—Luk 4:4, 8, 12.
IINGXAKI ESIMELE SIZIBALEKE:
Ukusebenzisa amajelo okuncokola ngokugqithiseleyo. Ukuchitha iiyure kwiiwebhsayithi okanye kumajelo okuncokola kuthatha ixesha esimele silisebenzise kwizinto ezisisondeza kuYehova
Imigaqo yeBhayibhile: Efe 5:15, 16; Fil 1:10
Ukujonga izinto ezingafanelekanga. Ukujonga imifanekiso engcolileyo kunokusenza amakhoboka amanyala okanye siziphathe kakubi. Ukufunda izinto ezibhalwe ngabawexuki kunokulonakalisa ukholo lwethu
Imigaqo yeBhayibhile: Mat 5:28; Fil 4:8
Ukubhala izinto ezingafanelekanga okanye ukufaka iifoto ezingafanelekanga. Ngenxa yokuba intliziyo inenkohliso, kungalula ukuba umntu abhale amazwi okanye afake iifoto ezingafanelekanga kwiwebhsayithi yokuncokola. Kodwa loo nto inokumenzela igama elibi okanye ikhubekise abantu abazibonayo
Imigaqo yeBhayibhile: Rom 14:13; Efe 4:29
BUKELA IVIDIYO ETHI, ZISEBENZISE KAKUHLE IIWEBHSAYITHI ZOKUNCOKOLA, UZE EMVA KOKO UXUBUSHE INDLELA YOKUBALEKA EZI MEKO ZILANDELAYO: